Kuziva KweBot Traffic NeSemalt Tips
Hazvingave zvisina kunaka kutaura kuti kushandiswa kwezvinhu zvakabatsira mabhizimisi akawanda kuti ashande zvakanaka uye akachengeteka paIndaneti. Iyo nzira yakachengeteka uye yakajeka yekudzivirira mabasa eusimba kune zvakawanda uye inogona kukubatsira kuti uwedzere mari yako. Izvo zvinoshandiswa zvinoitwa nenzira dzakawanda uye kuburikidza nehukama hwehutano zvakare. Bot traffic inoumbwa pane zvakabatana, izvo hazvina chazvinobatsira uye hazvigone kukuvimbisa iwe zvaunoda - gonfiabili usati toscana italy.
Alexander Peresunko, the Semalt Mutungamiri Akabudirira Mutengi, anotaura kuti mazuva ano zvave zvakadikanwa kuti vanhu vose vebhizimisi vaone, kuongorora, kuongorora, uye kubvisa kushambadzira kwenhema. Kana iwe uine zvimwe zvikwata zvepachikwata nevashambadziri vanoda mhepo chaiyo yevanhu, zvinobva zvave zvakakosha kuti iwe ubvise magetsi uye mabhoti, kupa vateereri vako chete nepamutemo uye chaiyo-vanhu. Kana iwe usingaiti saizvozvo, mabhoti achakurumidza kubvisa mari kubva kumawebsite ako, asingadzose chinhu asi kuzvidemba. Mabasa akasiyana anogona kuitwa kana vashanyi vako vasati vauya kubva kumapurogiramu ega kana mabot. Ita kuti vave vakavimbika uye vakavimbika sezvo iyi ndiyo nzira bedzi iwe unogona kukunda kuvimba kwevatengi vako. Rega ini pano ndikuudze iwe kuti mabhokwe akabatwa uye motokari yemigwagwa haigoni kuunza chero kutengesa kana kutungamirira kwebhizimisi rako. Izvozvo ndezvokuti kuwedzera kwepabonde navo kune yakakwirira kwazvo uye havakwanise kubatsire vadzidzisi vepawebsite.
Muchidimbu, zvinomanikidzira isu tose kuwana magwagwa echokwadi uye kudzivirira kuuya kwebhoti. Kushamwaridzana kwekutengeserana kwave kuripo kwemakore uye yakakura pamwe nenguva. Pane zvinetso zvinoramba zvichiitika pamusoro pemabasa ekunyengera uye mazano ebenzi anoshandiswa nevanoshamwaridzana, achibvarura mari kubva kuvashambadziri. Kana iwe wakanyanyisa nezvekutora bhizinesi rako kune rimwe danho rinotevera, haufaniri kutora mari kubva kuvashambadzi vako zvichienderana nebhoti rako uye mutengesi uipi. Vose vashandisi vanofanira kuedza kuita zvekutengesa chaiyo uye kurega kuvimba nekushanyirwa kwechokwadi. Kutumira mhanje yebasa kumapeji ako webhutano kana hukama hwekubatana hakuzombokuwana chero kutengeswa. Pane kudaro, zvinogona kuparadza kutarisa kwewebsite yako. Kana yako Google Analytics inoratidza bhoti nemugwagwa unonyangadza sezvokwadi, inguva yekudzivirira maail IP panguva pfupi. Vaya vanoita zvinyengeri vanotenga motokari kubva kune mamwe mawebsite kuburikidza nokubhadhara madhora mashomanana chete uye kuputira masayiti uye kubatana kunobatanidza nehuwandu hwekuona uye kushanyira izvo zvisingatongotendeuki kukutengesa.
Mabhodhi akasiyana uye zvishandiso zvinowanikwa pakugadzira zvisiri izvo. Iyi migwagwa uye izvi zvinoshanya hazvigoni kuunza maonero evanhu chaiwo pawebsite yako. Izvo zvinowanikwa kuburikidza nemapurogiramu eB bot anoramba achivandudza masayiti maminitsi ose. Nokudaro, zvakakosha kuona bots uye kuvabvisa. Vanenge vose vanobatana nevatengesi vanoshandisa mabhoti aya kuti vawane zvakawanda zvekutengesa kumapeji avo ewebhu, asi havakwanisi kuwana chero kutengesa uye kuparadza mukurumbira wavo wekutsvaga pamusana pemabasa ekunyengera. Iwe unofanirwa kubvunzurudza unyanzvi hweT IT nezvenyaya iyi uye kuti ungaurasa sei.